Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အဲ့ဒီမှာ မေးခွန်းလေးတွေရခဲ့ပြီး အခု ဒီနေရာကနေ အမေးရော အဖြေလေးပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။..
အဲ့ဒီမှာ မေးခွန်းလေးတွေရခဲ့ပြီး အခု ဒီနေရာကနေ အမေးရော အဖြေလေးပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။..
Zaw Lwin Win's Facebook
ရခိုင်ဒေသက ပြန်ရောက်လာတာ မကြာသေးတဲ့ တဲ့အပြင် ရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ နဲ့ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအထိ သွားရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ရခိုင်အရေး မေးချင်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မေးပါလို့ ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
***** ***** ****** ****** ***
Ko Nyi Nyi Kyaw - ကျွန်တော် မေးချင်တာကတော့ ရခိုင် ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ကျန်းမာရေးကို နိုင်ငံတော်က ဘယ်လို စီမံထားသလဲဆိုတာရယ် ကုလားတွေကို ဗျူးခဲ့ တဲ့အကြောင်းလေး လည်းသိချင်ပါတယ်ဗျာ..
Ko Nyi Nyi Kyaw - ကုလားရွာတွေ မှာ ရခိုင်တွေ ရှိသေးလား သူတို့အတွက် လုံခြုံမှု တွေ ရှိရဲ့လား?
ရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အားလုံးမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒုက္ခသည်များတဲ့ စခန်းတွေ (ရခိုင်ရော ကုလားပါ) မှာ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌါနက ဆေးပေးခန်းတွေ ဖွင့်ပေးပါတယ်။ သူနာပြု တက္ကသိုလ်က ဆရာမလေးတွေ ကလည်း ရခိုင်ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ လှည့်လည် ကုသ ပေးပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်အထိတော့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ ၀မ်းရောဂါ အပါအ၀င် ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား ရှိတယ်လို့ မကြားမိပါဘူးလို့ ဖြေပါရစေ.. ဗျူးခဲ့တာလေးကတော့ သူတို့တွေရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ နဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကိုအဓိကထား မေးခဲ့တာပါ။ သူတို့ကို ထောက်ပံ့ရေး အတွက် ပြည်မက လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့တွေမလာဘဲ ရန်ကုန်က မွတ်ဆလင်ညီအစ်ကိုများ ကသာ ဆန်အိတ် သုံးထောင်လှူဒါန်းတယ်။ WFP နဲ့ အစိုးရက ထောက်ပံ့တယ် ဆိုတာလောက်ပါဘဲ။ ကျန်တာကတော့ ရေတုံကင်တွေရှိပြီးသား ထပ်လိုတယ်ပြောသလို အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရေချိုးခန်း နဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုဖို့ နေရာ (ဗလီ) တွေ လိုနေတယ်ပြောပါတယ်။
ဖြေ။..... စစ်တွေမြို့နယ် ဘုမေ နားက ရွာတစ်ရွာမှာတော့ ရခိုင်လူမျိုး ငါးဆယ်လောက် ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြင်ခဲ့မိ သလောက်တော့ သူတို့က သတ္တိရှိရှိနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်နေပါတယ်။ ဒေသခံ ရခိုင်တွေ ပြောတာတော့ ကုလား သုံးရာလောက်က အဲ့ဒီ ငါးဆယ်လောက်ကို သွားရန်မစရဲဘူးတဲ့။ အခုအချိန်မှာတော့ ကုလားရွာထဲမှာ တပ်မတော် ရော ရဲတွေပါ ချထားပါတာကြောင့် လုံခြုံမှုလည်း ရှိနေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နီ စံ - မင်္ဂလာပါ ကိုဇော်လွင်ဝင်း..မေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်.
သိချင်တာက အတော်များပါတယ် ဒါပေမယ့် အတိုချုံးပဲ မေးပါ့မယ်။ ညီမတို့ အခု ပြည်ပမှာ ရှိနေတဲ့ အစ္စလမ် တွေက ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုသိထားသလဲ ဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတာ ညီမ တီးခေါက်ကြည့်လိုက်တော့..သူတို့အော်နေတာက..၇ခိုင်မှာ ဘင်္ဂလားကနေ၀င်လာတာ..ဗုဒ္ဓ ရခိုင်တွေပါတဲ့..ပြီးတော့ အိမ်တွေ မီးရှိူ့ တာ ၇ခိုင်တွေတဲ့..၇ခိုင်တွေက ရဲတွေနဲ့ ပေါင်ြး့ပီး မဟုတ်တာတွေ သတင်းလွင့်တာတဲ့ သူတို့ အစ္စလမ်တွေက လူနည်းစု ဆိုတော့..ခံနေ၇တာတဲ့..
မနီစံရေ... အခု ပြည်ပကနေ ဘင်္ဂလီတွေကို ထောက်ခံသူ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် တွေလုပ်နေတဲ့ အလုပ်က ၀ါးလုံးကို ၀ါးခြမ်းဖြစ်အောင် လှိုင်လှိုင် ၀ါဒဖြန့်နေခြင်းပါဘဲ။ သူတို့ပြောတယ်ဆိုတာကို ဖတ်ပြီး တော်တော်လေးရီမိတယ်။
ဒေသတွင်းမှာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်ဟာ အကြမ်းဖက် ရန်စသူ လူမျိုးခြား ဘင်္ဂလီတွေက ရခိုင်နယ်မြေကို လာမြေလုတဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခု အတွက် ပဋိပက္ခ ဖန်တီးမှု သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒါကို ဗြောင်းပြန်လုပ်ဖို့ နယ်မြေလုပွဲ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ထောက်ခံသူတွေက ဆက်လက် ကြိုးစားနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
December Min - ဘင်္ဂါလီ တွေနဲ့ အင်တာဗျူး လုပ်တဲ့အခါမှာ
(1) မြန်မာ့မြေပေါ်ကို ခိုးဝင်ရောက်နေထိုင်ပြီး မူရင်းတိုင်းရင်းသား ရခိုင်တွေကို ဘာ့ကြောင့် သတ်ဖြတ် ပြီး မီးရှို့ ဖျက်ဆီး လုပ်နေတာလဲ ဆိုတာရယ်..
(2) ဘာ့ကြောင့် တခြား လူတွေလို လူတွေကဲ့သို့အေးအေးမနေနိုင်ဘဲ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပါတယ်လို့ ဗြောင်လမ်ညာ နေတာလဲ ဆိုတာရယ်..
(3) အကြမ်းဖက်တဲ့ နေ့ က ဘာ့ကြောင့် ဘယ်လိုအကြောင်းတွေ ရဲ့ အထောက်အပံ့ ကြောင့် ဘင်္ဂါလီတွေက ယုတ်မာတဲ့ အြ့ပုအမူတွေကို လုပ်ရဲရတာပါလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ရှင်။
ဖြေ။ ။ အမှတ် ၁ မေးခွန်းအတွက် ကျွန်တော်တိုက်ရိုက် မေးမြန်းခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်က မြန်မာ့မြေပေါ် ခိုးဝင်နေထိုင်တယ်ဆိုတာ ၀န်ခံခြင်း မရှိလို့ပါဘဲ။ နောက်ပြီး သူတို့က ခံရပါတယ်လို့သာ အော်နေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အခြေအနေမှာ အဲ့ဒီလို သွားမေးရင် မေးသူနဲ့ ဖြေသူ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဖို့သာရှိတဲ့ မေးခွန်းမို့ တိုက်ရိုက် မမေးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် "ခင်ဗျားတို့ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်မှာမွေး၊ မြန်မာပြည်မှာကြီးပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီးပြောနေပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ မြန်မာစကားတောင် မတတ်တာလည်း" ဆိုပြီး ကျွန်တော် မေးခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ရတဲ့ အဖြေကတော့ "ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆင်းရဲလွန်းလို့ ပညာမသင်ရဘူး။ လူတွေနဲ့လည်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခွင့် မရဘဲ အိမ်ကလူတွေနဲ့သာ နေရလို့ မြန်မာစကား မတတ်တာပါ" လို့ဖြေပါတယ်။..
အထက်က ကျွန်တော် ဖြေထားတာဟာ အမှတ် ၂ မေးခွန်းပါ ဖြေပြီးသား ဖြစ်သွားပြီ ထင်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု စတင်ခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ ဘယ်လို အထောက်အပံ့တွေကြောင့် အခုလို ယုတ်မာတဲ့ အပြုအမူတွေလုပ်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက်တော့ ဒါဟာ စစ်ပွဲပုံစံဖြစ်သွားတဲ့အပြင် နယ်မြေလုပွဲ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံကနေ အားပေး ထောက်ခံနေကြတာမို့ အခုလို ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
姜吉敏 - ကျွန်တော် သိချင်တာကတော့ အဲဒီရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မှတ်ပုံတင်(ပြု/ဧည့်) (သို့) တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (သို့) မွေးဖွားရာခံစားခွင့် (သို့) ဘာအထောက်အထားနဲ့ နေထိုင်နေကြတာလဲ... အနာဂါတ်ရခိုင်ဒေသ ရခိုင်သွေးချင်းတွေအတွက် ဘဝအာမခံချက်တွေရှိ မရှိသိပါရစေ...
ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ လ၀က က လိုက်လံ စာရင်းပြုစု စစ်ဆေး နေပါတယ်။
နိုင်ငံသားအထောက်အထား စာ၇ွက်စာတမ်းတွေ ဘယ်လို အခြေအနေရှိတယ် ဆိုတာလည်း အဲ့ဒီ စာရင်းတွေပြီးမှ သိရမှာပါ။
အနာဂတ် ရခိုင်သွေးချင်းတွေအတွက် ဘ၀အာမခံချက်တွေ ရှိမရှိ ဆိုတာကတော့ တကယ့်ကို ဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ဒီတစ်ခါသာ ပဋိပက္ခ ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ဖက်စလုံးက ဒါထက် ကောင်းတဲ့ အပြင်အဆင်တွေ အပြင် ပြင်းထန်ပေါက်ကွဲစေတဲ့ လက်နှက်တွေနဲ့ တိုက်ကြပါတော့မယ်။ နောက်တစ်ခါ ထပ်မဖြစ်အောင် အစိုးရအနေနဲ့ သေချာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Vito Moe Ang - bro...can pls share us
1. how many babies in each bangali family? 2.any plan or program government setting up to protect ethnics rakhines 3.any idea about rehabilitation program and new villages government is going to build for ethnics 4.how about local bangalis who already have IC n kamans....5. how difficult to drive foreigners out based on situation u find
ဘင်္ဂလီ မိသားစုတစ်ခုမှာ ကလေးဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာ တကယ့်ကို ပြောရခက်ပါတယ်။ မွေးနိုင်သလောက် မွေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ယောက်ကျားတစ်ယောက်က မိန်းမ လေးယောက်ယူပြီး ကလေး ဆယ့်ခြောက်ယောက်လောက် မွေးဖို့အစီအမံပါဘဲ။ အစိုးရကတော့ မောင်းတောဒေသမှာ ကန့်သတ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာ ထိန်းနိုင်ခဲ့သလား ဆိုတော့ မထိန်းနိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်လို့သာ ဆိုရမှာပါ။
ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် အကာအကွယ်ပေးဖို့ ဆိုပြီး အစိုးရက ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အလေးထား လုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးအတွက် လုပ်ပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ တိတိကျကျတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ကမန်လိုမျိုး နိုင်ငံသား စာရင်းဝင် ဘင်္ဂလီ (မွတ်စလင်+ ဗုဒ္ဓဘာသာ) အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိရပေမယ့် လူနည်းစုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးကျော်သူ ဘင်္ဂလီတွေကိုတော့ ဘယ်လို လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာ ဒီနေ့ သမ္မတကြီးရဲ့ သဘောထား အရ ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ် ဆိုတာ သိနိုင်ပြီထင်ပါတယ် ခင်ဗျား..
စကားချပ်။ ။ ကျွန်တော် သေသေချာချာ ထပ်မံ တစ်ခုပြောနိုင်တာက နောက်တစ်ခါ ဖြစ်လာရင် ပထမတစ်ခါထက် ပိုမိုပြင်းထန်မယ် ဆိုတာရယ် လက်နှက်တွေအထိ ပါလာနိုင်တာမို့ အစိုးရ အနေနဲ့ အခုကတည်းက ပြတ်ပြတ်သားသား အပြီးတိုင် ဖြေရှင်းလိုက်ဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာပါဘဲခင်ဗျား...
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အဲ့ဒီမှာ မေးခွန်းလေးတွေရခဲ့ပြီး အခု ဒီနေရာကနေ အမေးရော အဖြေလေးပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။.. . All Rights Reserved